Ukufaneleka 2 | Isilimela 2022
3 Ukulahleka kobunzima beHacks ukukunceda ulahle iiponti ezili-10 kwiiveki ezi-2
Landela iingcebiso ezikule nqaku ukuze ufunde indlela yokulahla iiponti ezili-10 kwiiveki ezi-2 ngaphandle kokutya ukutya okungalunganga, ukuthatha iipilisi ezininzi, okanye ukwenza umsebenzi okruqulayo.
I-10 yeeProteni zeProtini eziNgcono ngokuSebenza ngokuPhulukana nobunzima
Ukunciphisa umzimba kunzima ngakumbi kwabanye abantu. Ukuba ujonga eyona protein iphambili yokunciphisa umzimba, olu luhlu sele ulugubungele.
Imigaqo emi-7 elula yokuPhila ngokungena kwiSimo kwiiveki ezimbini
Xa ufuna ukufunda indlela yokuma ngokukhawuleza, kukho imigaqo ebalulekileyo ekufuneka uzame ukuyilandela. Funda apha ukuze ufunde indlela yokufezekisa iinjongo zakho.
Utshintsho olukhulu kumadoda emva kokuguqula iminyaka engama-50 ubudala
Olunye utshintsho olukhulu emadodeni emva kweminyaka engama-50 ubudala. Jonga ubhetyebhetye, ukungazinzi kwengqondo, i-testosterone esezantsi, kunye nokunqongophala kwamanzi emzimbeni.
I-10 yoQeqesho loMzimba oLungeleyo olwenza ukuba ufumane iBuck yakho
Funda ukuba le mithambo yomzimba ilishumi ingakunceda njani ufumane ukuzilolonga ngexesha elincinci.
Iinjongo ezili-15 zoKulolonga eziya kukunceda uphile ubomi obunempilo kulo nyaka
Lixesha lokuba ujolise kubomi obunempilo, kodwa uqala phi? Eli nqaku liza kukunceda usete iinjongo zomzimba kwaye wenze njengesikhokelo sokuqalisa.
Ulahla njani Ubunzima bamanzi ngokukhawuleza nangokuNdalo
Ubunzima bamanzi yinkqubo apho izicwili zethu ziqokelela khona izinto ezingamanzi ezibangela ukuba zidumbe. Nazi iindlela ezili-9 zokuba ulahle njani ubunzima bamanzi ngokukhawuleza kwaye ngokwendalo.
Iimbono ezili-17 zokuKhuthazeka ukuba unciphise umzimba ngoku
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ungakhuthazeka njani ukunciphisa umzimba? Nazi izizathu zokuba ulahlekelwe yinkuthazo kunye neendlela ezili-17 zokukunceda uhlale ukhuthazekile.
IiNkqubo ezi-6 zoKwakha umzimba ezenza ukuba ukuSebenza ngaphandle kube mnandi ukutsiba
Eziapps zisebenzisa ukomelela komzimba, zisenza umthambo wonwabe ngakumbi kunangaphambili. Ngezixhobo zokusebenza zomzimba ezijolise kumdlalo, awusoze ufune ukutsiba umthambo (nkqu nangomvulo!)
Uninzi lweMithambo eQeqeshiweyo yokuBumba uMzimba wakho
Ukuba ufuna i-firm egqibeleleyo kwaye ijikeleze i-booty ehlotyeni, qiniseka ukuba ujonge le mithambo ye-butt.
Uyifumana njani iNkuthazo yokuSebenza xa uzondi ukuzilolonga
Ukuba uyakucaphukela ukuzilolonga, wenza esinye sezi zizathu zili-10 ubuncinci. Nazi iindlela eziqinileyo zokuhamba ngokudlula kubo kwaye unike umzimba wakho inkathalo oyifunayo.
Imifanekiso engama-36 ukubona ukuba yeyiphi imisipha owolulayo
Funda ubuchule obuchanekileyo kunye nezihlunu ezithile osebenza ngazo kunye nama-34 aqhelekileyo kunye ne yoga.
I-11 yeeFitness Fitness Trackers iiWatch Ukugcina impilo yakho ikwindlela
Kunzima ukucinga ngokusebenzela iinjongo zempilo ngaphandle kwesixhobo sokulandela umkhondo. Nazi iiwotshi ezili-11 ezifikelelekayo zomzimba onokuthi uzame.
Ezi zinto zi-7 ziya kwenzeka xa usenza i-BodyPump Group Exercise
Inokuba lixesha lokunyusa ibha- ibarbell ekunye nokuzilolonga kweqela leBodyPump!
I-11 yeYoga yamaQabane ibanga ukuba abantu abatshatileyo bakhe ubuhlobo
Ngaba ufuna ukuzama i-yoga kunye nomntu omthandayo okanye umhlobo olungileyo? Ukuziqhelanisa ne-11 yamaqabane eyoga kuya kunceda ukwakha ulwalamano, ukuthembana kunye nonxibelelwano!
Iindlela ezili-12 eziQinisekisiweyo zokuKhawulezisa ukubuyiswa kweMisipha
Ngaba ujonge ukulahla ezo ntlungu kunye neentlungu emva koqeqesho olunzima? Zama ezi ndlela zili-12 zingqinisisiweyo zokukhawulezisa ukubuyisela izihlunu.
Uqeqesha njani iMarathon kwiinyanga ezi-3 okanye ngaphantsi
Ukuba ukugqiba i-marathon kuluhlu lwakho lwamabhakethi, khangela eli nqaku malunga nendlela yokuqeqesha i-marathon kwiinyanga ezi-3 okanye ngaphantsi.
Ukuzivocavoca umzimba onokukwenza ebhedini rhoqo kusasa
Ngaba unengxaki yokufumana amandla okuzivocavoca kusasa xa ungafuni ukushiya ibhedi yakho efudumeleyo, epholileyo? Kulungile emva koko, nantsi imithambo elishumi oyenzayo ebhedini.
Iinkqubo zokubaleka ezili-10 zalo lonke uhlobo lweembaleki
Ngaba ufuna ukuqhuma ngokusebenzisa ixesha lokuzilolonga, okanye vele usuke esofeni? Ezi zixhobo zili-10 ziqhubayo zinceda amagqala emarathon kunye ne5k newbies bafumane okungakumbi ekusebenzeni.
Iingcebiso ezili-9 ekufuneka uzenzile ngokwenyani xa ufuna ukunciphisa umzimba ngokukhawuleza
Ewe ungalahla ubunzima ngokukhawuleza, kodwa konke malunga nokuba smart, ukuzinikela kunye nokuba nentando yentsimbi.